Maamulka Juba oo ka hadlay Al Shabaab lagu qabtay Kismaayo |
Maamulka Juba oo ka hadlay Al Shabaab lagu qabtay Kismaayo
Kamagra Polo buy online, buy clomid online. Maamulka KMG ah ee Juba ayaa ka hadlay Kooxo ka tirsan Ururka Al Shabaab oo lagu qab qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
General C/laahi Sheekh Cismaaciil Fartaag oo shir jaraa’id kku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Cutubyo ka mid ah Al Shabaab lagu qabtay Magaalada isagoona tilmaamay in Al Shabaab ay qas iyo xasilooni la’aan ay ka wadaan.
Waxuu Gen Fartaag carabka ku dhiftay in ay sameeyeen Qorshe Cusub oo lagu sugayo amaanka guud ee Magaalada Kismaayo kadib markii buu yiri ay soo bateen Dilalka qorsheysan ee ka dhanka ah Saraakiisha Maamulka iyo Dadka Shacab ah.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu qeexay in Al Shabaab ay ka hortagi doonaan islamarkaana aan dhibaato dambe ka dhaci doonin sida uu hadalka u dhigay General C/laahi Sheekh Cismaaciil Fartaag.
Gen Fartaag ayaa xusay in ay gacanta ku hayaan Rag ka tirsan Al Shabaab kuwaasi uu ku tilmaamay in qaarkood Xukuno lagu riday kuwa kale ay wali dhiman yihiin.
Amaanka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa faraha ka baxa waxaana ku soo batay Dilal qorsheysan oo ka dhan ah Saraakiil, Askar ka tirsan Maamulka KMG ah ee Juba iyo Dadka Shacabka kuwaasi inta badan ay fuliyaan Kooxo ku xiran Al Shabaab.